Kunyangwe naFrancisco anoponeswa kubva mukukanganisa kwepurogiramu | Linux Vakapindwa muropa
Mumaawa mashoma eRosario kuvhurwa, vaongorori vezvekuchengetedza vakawana kusagadzikana munzira yekushandisa account yekuwana.
Kunyangwe naFrancisco anoponeswa kubva kuzvikanganiso zvehurongwa. Mazuva mashoma akapfuura eiye Vatican akapinda muInternet yezvinhu musika neRosary. Asi, zvinoonekwa kuti ngirozi dzinochengeta hadzisati dzave nekuparadzaniswa kwemakomputa. Vakawana zvikanganiso zvekuchengetedza mukushanda kwechigadzirwa.
1 Chii chinonzi eRosario?
1.1 Iyo inoshanda sei
2 Nei kunyange iye Francisco asina kununurwa kubva kumatambudziko ekuchengetedza?
Chii chinonzi eRosario?
Iyo Dzvanya Kunamata eRosary yemagetsi rozari ndeye kushambadzirayekudyidzana, akangwara chishandiso nemaapplication inoshanda se chishandiso chekudzidza kunamatira rozari yerunyararo pasirese. Inogona kupfekedzwa sechishongo uye inoitwa nekugadzira chiratidzo chemuchinjikwa.
Chigadzirwa chinoenderana ne chirongwa chemahara wezita rimwe chete, iyo inobvumidza mukana weyekuteerera gwara, yakasarudzika mifananidzo uye zvakasarudzika zvemukati pamunamato weRosary.
Chigadzirwa zvakare inoteedzera mushandisi matanho, macalorie akatsva uye nzvimbo. Neimwe chikonzero, inokumbirawo mvumo yekufona.
Panyama, chishandiso chine gumi akateedzana marozari eblack agate nehematite rozari, uye neyechinjikwa chakangwara iyo inochengetedza rese data rehunyanzvi rakabatana nechishandiswa.
Kana vakatendeka vachida kunamata, vanogona kushandisa iyo Click to Pray application ku ebequeath rimwe rozari. Zvinoenderana neshoko rehurukuro reVatican:
"Panyama, chigadzirwa chine gumi dzakateedzana nhema agate uye hematite rozari marozari, uye muchinjikwa wakangwara unochengeta dhata rese rehunyanzvi rakabatana nechishandiswa. Kana achinge amiswa, mushandisi anokwanisa kusarudza pakati pekunamatira rozari yakajairika, rozari yekufungisisa uye akasiyana marudzi erosari dzinozovandudzwa gore rega rega. Kana munamato wangotanga, rozari yakangwara inoratidza kufambira mberi kwemushandisi kuburikidza nezvakavanzika zvakasiyana uye inochengeta rosari yega yega.
Rozari iyi inoshanda pamwe chete neKinoti Kunamata network, pasocial network inobatanidza vakatendeka vechiKatorike kubva kumativi ese epasi kuti vanamate. Zvinofungidzirwa kuti Baba Vatsvene vane chimiro chavo mazviri, asi tichifunga kuti pavakange vari Archbishop weBuenos Aires chinhu chemberi chaakashandisa yaive rekaseti rekaseti, ndinozvibvumira kusahadzika kuti anotora chikamu nekushinga mumunhu.
Iyo Dzvanya Kunamata eRosary zvakare inokutendera iwe kuti uchengete zvinyorwa zvezuva nezuva uye zvemwedzi zvinangwa zveku "kuvaka nyika nekunaka kweEvhangeri."
Nei kunyange iye Francisco asina kununurwa kubva kumatambudziko ekuchengetedza?
Fidus Information Security, kambani yeUK, yakawana kushushikana chinguva chipfupi chatanga. Saizvozvowo Baptiste Robert, nyanzvi yekuchengetedzwa kwemakomputa yeFrance
Panzvimbo ye password, iyo app inotumira PIN kukero yeemail yakanyoreswa nevakatendeka kuti upinde.
Dambudziko nderekuti iyo PIN kodhi inogona zvakare kuonekwa nechero munhu aigona kuona network traffic iyo iko kunosunganidzwa nekushandisa. Izvi zvakakonzerwa nechikanganiso chechirongwa icho pamusoro pekutumira pini kune email yemushandisi, yaitumira kunetiweki yese Dzvanya Kunamata.
Ndokunge, mukufunga, chero munhu aigona kuona iyo PIN asina kuwana iyo email account. Nekuti kukumbira PIN inobuda muchikamu chazvino, munhu anogona kudzingwa otadza kupinda zvekare nekuti mumwe munhu ave kushandisa PIN yakakumbirwa. Iye anopinda aigona kuona chero ruzivo rwakanyoreswa musystem.
Dambudziko ratogadziriswa kare.
Nhau idzi dzinomutsa mibvunzo yakawanda inonakidza, mimwe yacho tichazvichengetera pachedu nekuti iri bhurogu nezve tekinoroji uye kwete nezve chitendero. Asi zvingaite zvakakomba programmer ane hunyanzvi anogona kukanganisa sekutumira pini kunetiweki yese uye pamusoro pasina kunyorera?
Kune rimwe divi, uye ini handisi kutaura nezveVictoria zvekare, ndinofunga tiri kubuda mukuigadzira "smart" uye yakabatana nemidziyo inoshanda kwazvo iri analogu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Kunyangwe iye Francisco haana kuponeswa kubva kune zvikanganiso zvevagadziri
Hapana chinhu chemunhu chinofanirwa kunge chiri mutorwa kwatiri, chikamu icho programmers zvakare chinowira machiri.
Ndini here kana kuti chinyorwa hachina kukwana?
Ini ndinogona kunge ndisingazive kunyora.
Aritz ndizvozvo, zvinoita sekunge chinyorwa hachina kukwana.
Hongu, ndakangoona kuti mutongo wekupedzisira hauna kubuda wakakwana. Ndatenda
Ndakangoona kuti sei wazvitaura. Kutenda nekuraira.